အရိပ်ချစ်: Heart Canteen's photo.
တခါက အရမ်းချစ်ကြပြီး လက်ထပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ် ... ဖြစ်ချင်တော့ ... လက်မထပ်ခင် တစ်လလောက်အလို ... ကောင်မလေးက ကား accident ဖြစ်ပြီး ... မျက်နှာမ
ှာ သေရာပါတဲ့ အမာရွတ်တွေနဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်သွားပါတယ် ။
အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေးက သူ့ချစ်သူကောင်လေးဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ် ။
"ငါနင့်ကိုလက်မထပ်နိုင်တော့ဘူး .. လှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ယောက်ကိုပဲ နင်လက်ထပ်လိုက်ပါ ... တသက်လုံး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ နင်အတူနေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါသိပါတယ် ... ငါကနင့်အတွက် တန်ဖိုးမရှိတော့ပါဘူးဟာ" ...
သူ့ကောင်လေးက အခုလိုပြန်ပြောတယ် ..
" နင်နဲ့မတွေ့တဲ့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရမ်းကားတဲ့လူတစ်စုက ငါ့ကို ၀ိုင်းပြီးထိုးကြိတ်ကြတယ် ... အပြင်ကဒဏ်ရာတွေက ကျက်သွားခဲ့ပေမယ့် ... ခေါင်းကိုထိခိုက်မိတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ငါတသက်လုံးမျက်စိမမြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ် ... ဒါကြောင့် တကယ်တမ်း ကိုယ့်ချစ်သူကို အရှက်ရစေတဲ့လူဟာ ငါပါဟာ ... နင်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ... ငါနင့်ကိုမြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ... ဖြစ်နိုင်ရင် ငါ့ရဲ့လက်ထပ်ခွင့်ကို မငြင်းဆန်လိုက်ပါနဲ့နော် "
ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ လက်ထပ်လိုက်ကြတယ် ... ... နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာတဲ့အထိ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ နားလည်မှုတွေ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ အရာရာကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ...
အိမ်ထောင်သက်နှစ် နှစ်ဆယ်အရောက်မှာတော့ ... ဇနီးဖြစ်သူ ကောင်မလေး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ် ။ အသုဘအခမ်းအနားပြီးတော့ ... ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ အုတ်ဂူရှေ့မှာ ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကောင်လေးက မျက်ရည်တွေစီးကျလာပြီး ... အခုလို တီးတိုးပြောလိုက်ပါတယ် ။
"နင်ထင်ခဲ့သလို ငါ မျက်မမြင်တစ်ယောက် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ... ချစ်သူရဲ့အမြင်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် မနေလိုတဲ့ နင့်ကို လက်ထပ်နိုင်ဖို့အတွက် ငါဟန်ဆောင်ခဲ့တာပါ ... နင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ဟန်ဆောင်မိခဲ့တဲ့ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟာ ... ငါနင့်ကို သေတဲ့အထိ ချစ်နေဦးမှာပါ " တဲ့ .
Posted by Ayeit Chit at 06:40